ကနေ့ အလုပ်ကနေ ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ စာလေးဘာလေးများ ရောက်လေမလားပေါ့။ စာတိုက်ပုံးကို သွားစစ်မိတယ်။ ကြော်ငြာစာရွက်တချို့နဲ့ ပုံမှန်လာနေကြ အသီးသီးသော ရေမီးဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ စာတစ်ချို့ပဲတွေ့တယ်။ အဲသည်ထဲမှာ စာတစ်ရွက်က အတော်လေး ထူးခြားတယ်။ စာထဲရေးထားတာက သည်လို။
ROUTINCE CHANGE OF ELECTRICITY METER
1. Your electricity meter is due for replacement under our routine change programme.
2. We will be carrying out the meter change at your premises on 05 Dec 2007. Your electricity supply will be interrupted for about 10 minutes during the change. If the meter is installed outside your premises, you need not be present.
3. However, if you have any concern regarding the supply interruption please call us at tel xxxxxxxx for clarification.
4. There will be no charge for the meter change. We regret any inconvenience caused
လျှပ်စစ်မီတာအလှည့်ကျ လဲလှယ်ပေးသွားမယ်ပေါ့။ သမန်ကာရှန်ကာဖတ်လိုက်တော့ မီးပျက်မယ်ပေါ့။ မီးပျက်တာပဲ ဘာထူးဆန်းလဲပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေအတွက် ပြောပါတယ်။ မီးပျက်တာ ဘယ်လောက်မှ မထူးဆန်းပါဘူး။ ပျက်တဲ့ အချိန်လေးပဲ ထူးခြားတယ် ။ အမယ်လေး ဆယ်မိနစ်များတောင် ပြတ်မယ်ဆိုပဲဗျာ။
တော်တော်လေး အံ့အားသင့်သွားမိတယ်။ သုံးစွဲသူ အပေါ် ဘယ်လောက်များ အရေးထားလိုက်လဲဗျာ။ လျှပ်စစ်မီး ဆယ်မိနစ် ပြတ်တောက်မယ် ဆိုတာကို ဆယ်ရက်ကြိုပြီး အကြောင်းကြားတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာများ ဘယ်အချိန်လာလို့ ဘယ်အချိန် ပြတ်မယ်ဆိုတာလည်း မသိရ။ ဘာအကြောင်းကြောင့် ဆိုတာလည်း မသိရ။ ရံဖန်ရံခါတော့ မခိုင်လုံတဲ့ ရပ်ကွက်သတင်းအရ လောပိတမှာ ရေနည်းလို့ ဆိုတာက တစ်ကြောင်း၊ ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင် ပျက်လို့ ဆိုတာက တစ်သွယ်။ အခုတော့ လျှပ်စစ်မီးဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် မီးစက်ရှိမှ ရတဲ့ အရာရယ်လို့ ဆိုရမလားရယ်တောင် ဖြစ်နေပြီ ဆိုပါလားဗျာ။
Filed Under : Opinion, Sharing
“အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆရာ”
“မင်းမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ဆရာ့ကို ဟိုးမြင်နေရတဲ့ စပါးခင်းထဲကို သွားပြီး အကြီးဆုံး စပါးနှံတစ်ခု သွားခူးခဲ့စမ်းပါ။” ”မင်းလိုက်နာရမှာက စပါးခင်းကို တစ်ကြိမ်ပဲ ဖြတ်လျှောက်ခွင့်ရှိတယ်။ ဖြတ်သွားပြီးမှ နောက်ပြန်လှည့်လာပြီးခူးခွင့်မရှိဘူး”
ကျောင်းသားက စပါးခင်းကို သွားတယ်။ စစချင်းအတန်းမှာပဲ စပါးနှံ အကြီးကြီးတစ်ခုကို သူတွေ့တယ်။ သို့ပေမဲ့ နောက်အတန်းတွေမှာ ဒီ့ထက်ကြီးတဲ့ အနှံတွေ့ဦးမှာပါလေဆိုပြီး သူမခူးခဲ့ဘူး။ ဆက်လျှောက်လာရင်းနဲ့ နောက်ထပ် စပါးနှံ အကြီးကြီးတစ်ခုကို တွေ့ပြန်တယ်။ သို့ပေသည့် ဒီ့ထက်ကြီးတဲ့ အနှံရှိဦးမှာပါလေဆိုပြီးတွေးရင်းနဲ့ သူမခူးပြန်ဘူး။
ဆက်လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်းနဲ့ စပါးခင်း အလယ်လောက်ရောက်ရော သူတွေ့တဲ့ စပါးနှံတွေက အရင်ဦးဆုံး သူတွေ့ခဲ့တဲ့ စပါးနှံလောက် မကြီးဘူးဆိုတာ သူသိလိုက်ရတယ်။ အကြီးဆုံးစပါးနှံကို သူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ ဆိုတာသူသိလိုက်ရပြီး စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ဆရာ့ဆီ လက်ဗလာနဲ့ပဲ ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။
ဆရာကပြောတယ်။ “အေးကွ ... အချစ်ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ သူ့ထက်သူ့ထက် ကောင်းတဲ့ဟာကို ရှာရင်း ရှာရင်းနဲ့ပဲ တစ်နေ့မှာ အကောင်းဆုံးအရာကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့မှန်း နောက်ကျမှသိရတတ်တယ်။ အဲဒါအချစ်ပဲ”
“ဒါဆို အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကရော ဆရာ...”ကျောင်းသားက ဆက်မေးတယ်။
“ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့အတွက်တော့ မင်းပြောင်းခင်းကို သွားလိုက်။ အကြီးဆုံးပြောင်းဖူးတစ်ဖူးကို ခူးပြီး ဆရာ့ဆီ ပြန်လာခဲ့” ” ဒါပေမဲ့ စောစောကလိုပဲ ပြောင်းခင်းကို တစ်ကြိမ်ပဲ ဖြတ်လျှောက်ခွင့်ရှိတယ်။ ဖြတ်သွားပြီးမှ နောက်ပြန်လှည့်လာပြီးခူးခွင့်မရှိဘူး”
ကျောင်းသားလည်း ပြောင်းခင်းကို သွားတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ စောစောတုံးကလို အမှားမျိုး ထပ်မမှားအောင်သူ သတိထားတယ်။ ပြောင်းခင်း အလယ်လောက်အရောက်မှာ သူ စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့ အရွယ်ခပ်လတ်လတ်ပြောင်းဖူး တစ်ဖူးကို ခူးပြီး ဆရာ့ဆီ ပြန်လာခဲ့တယ်။
“ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မင်းပြောင်းဖူးရခဲ့ပြီပေါ့ ဟုတ်လား ... မင်းလိုချင်တာကတော့ အကောင်းဆုံးဆိုတာကို လိုချင်တာပဲ ... တကယ်တမ်းမှာတော့ မင်းရခဲ့တဲ့အရာသည်သာ မင်းအတွက် အကောင်းဆုံး၊ အသင့်တော်ဆုံးလို့ ယုံကြည်နေဖို့ပဲလိုတယ်” “အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုတာသည်လည်း ဒီသဘောပဲ”
နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။ နယ်မြို့လေးကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် အလည်လာတဲ့ခါကျတော့ လမ်းဘေးက ဘိန်းမုန့် ရောင်းတဲ့ အဖွားကြီးတစ်ယောက်ဆီက ဘိန်းမုန့် ၀ယ်စားပါတယ်။ အသက်အရွယ်တော်တော်လေး အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားကြီးဟာ အင်္ဂလိပ်စာ နားမလည်လောက်မှန်း နိုင်ငံခြားသားကရိပ်မိတယ်။ အဲဒါနဲ့သူက ဘိန်းမုန့်ကို လက်ညှိုးထိုးပြ၊ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြပြီး ပါးစပ်ကလည်း "One..One... (၀မ်း.. ၀မ်း... )" ပေါ့။ အဖွားကြီးက နိုင်ငံခြားသား ဘိန်းမုန့်တစ်ခု စားချင်မှန်း ရိပ်မိပြီး ဘန်းထဲက သူလှီးထားပြီးသား ဘိန်းမုန့် တစ်ခုကို ပေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသားလည်း စားကြည့်တယ်။
အင်း အရသာကောင်းတယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ နိုင်ငံခြားသားလည်း နောက်တစ်ခုထပ်စားချင်စိတ် ဖြစ်လာတာနဲ့ ပါးစပ်ကလည်း "Another One... (အနားသားဝမ်း)" ပေါ့။ ဒီတစ်ခါတော့ နိုင်ငံခြားသားက စားချင်စိတ်နဲ့ အဖွားကြီးနားလည်သော၊ နားမလည်သော မစဉ်းသားပဲ ပြောချလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ အဖွားကြီးကလည်း အဲဒီမှာ အဖွားကြီးကလည်း ဘိန်းမုန့် အ၀ိုင်းကြီးထဲက အနားသားလေး တစ်စိတ်ကို လှီးပြီး ပေးလိုက်တော့တယ်။ နိုင်ငံခြားသားလည်း သည်အဖွားကြီး သူပြောတာ နားလည်တယ်ဆိုပြီး သဘောကျ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။
ယခုခေတ်မှာ ကလေးကစားစရာကအစ အဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံး စက်ကိရိယာတွေ အထိ ရီမုတ်ကွန်ထရိုးခေါ်တဲ့ အဝေးထိန်းကိရိယာနဲ့ ကင်းလွတ်တဲ့ အရာ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ အဲဒီအဝေးထိန်းကိရိယာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတလေ့လာလို့ ရအောင် ဒီနေရာမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့မှာ သွားရောက် အဖွဲ့ဝင်ပြီး ဖတ်ရှုနိူင်ပါကြောင်း ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
နှင်းဆီနီနီဘလော့မှာ သွားဖတ်ရင်းနဲ့ တွေ့မိရာက ဘလော့ဘယ်လောက်ထိ စွဲနေသလဲ စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆို ဖြေကြည့်ပါလား။ ကျွန်တော်ဖြေတာတော့ ရာနှုန်းဒီလောက်စွဲနေတယ် ဆိုပါတယ်။
Myanmar (Burma) – Ngar minn ko chit tal
Papiamento - Mi ta stimaboPersian - Doo-set daaram
2009 April Currency Review
2009 ခုနှစ် ဧပြီလ အတွင်းမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာငွေ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 703.6667 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပြီး ဧပြီလ 30 ရက်နေ့မှာ အမြင့်ဆုံး 7...
Someone putareal engine inaBarbie car and it's glorious - [image: Twitter][image: Facebook] Barbie's toy cars were pretty cool for kids, but the mini cars aren't *that* much fun. After all, they can only goawhop...
Billy La Min Aye - [image: D4F66819-B704-498F-ACAC-59C8C28BA0F7]
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် (၂၆) – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် - Grammar ဆိုတာ မလေ့လာလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လေ့လာရတဲ့အခါမှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေ၊ မှတ်သားဖွယ်ရာတွေ များလွန်းတော့ ငြီးငွေ့လာတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ယခုလမှာ gramma...
"ရေခဲမီး" ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ဂိုဏ်းစတားဇာတ်ရုပ်နဲ့ မြင်ရမယ့် ထူးအောင် - ဒါရိုက်တာ ဇမ္ဗူထွန်းသက်လွင် ရိုက်ကူးနေတဲ့ "ရေခဲမီး" ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို မေလ (၂၄) ရက်နေ့ က ရန်ကုန် ၊သန်လျင်ရှုတင်အိမ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သ...